Meaning of isikhundla omuhle kanye nesikhundla reverse Tarot "izwe", umlingani imizwa?
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Meaning of isikhundla omuhle kanye nesikhundla reverse Tarot "izwe", umlingani imizwa?
Ikhadi le-"impumelelo" kuyinto endleleni
okubhula ikhadi 3500 yen ukuba baqaphele okushiwo
professional umbhuli 'kwezwe' isikhundla reverse uthole asihlole khulula has a "isifiso ekugcwalisekeni", njll ezinhle kakhulu incazelo "izwe" is, thina befanele aholelwe umphumela izimo ezibangele bakhe kuyinto okwanelisayo yini zonke izici.
Nakuba leli khadi nguye okuqondene Major Arcana, yaziwa for esiphezulu yayo phakathi kwabo unjengobalile linencazelo ezinhle. amathemba u-Lee nokuthi izifiso zigcwaliseka, kukhona umuzwa ukuthi impumelelo, kodwa ngoba ukuthatha ngomqondo wokuthi kwaqedwa sokugcina, ukuthuthukiswa kakhulu ngaphambi kungabuye wayecabanga ngaso njengoba ngeke kulindeleke.
isikhundla omuhle 'kwezwe "kuthiwa kusho" zwe ", okusho ukuthi ungakwazi ukuthola isimo esihle ukuze unqobe kuze umzabalazo nobunzima, inkathazo lokhu nge. Ukuze kusho usuku oluhle, uma uthando emshadweni, Ngingase unquma ukushada isiphakamiso kwaba kude kangaka kuye esasiyihambisela ukujola. Uma
azikho zamanje isoka umuntu, khona-ke kungenzeka ukudlala senzakalo kwesibhamu, ngeke aphike ukuthi kungenzeka ukuthi enye inhlangano umuntu ikusasa. Umuntu ungubani ukuba ukhathazekile e uthando unrequited angase ukuthi wathola ukuthi izinto kufanele uthande imizwa yothando, ngezinye izikhathi kusukela kuye kungaba kungalindelekile wavuma.
kuze kube manje izifiso namathemba agcwaliseka "izwe", isibonakaliso sokuthi kungenzeka ukuba uthole imiphumela engcono oye elinde engqondweni yami. Ngoba imizwa yakhe ufuna ngakuwena, kuye ukuba ukhathazekile kungaba kungenzeka kube yimpumelelo ngisho noma indlela kusuka bebodwa. Nakuba ukuchitha isikhathi fun nabantu ababili, sincoma ukuthi ukunciphisa ibanga.
owayephikisana imizwa isikhundla reverse of the "emhlabeni" kuthiwa kusho
"izwe Uma ngabe inkambu "kuyinto isikhundla reverse, ke emzabalazweni kanye nemizamo, kusho ukuthi Kuzoqeda limbo kanzima ukusho ukuthi egculisayo. umshado
kuyoba isiphakamiso kusukela hhayi ngokungathi s?na abaphikisi, noma okubi nakakhulu kalula samukelwa, endaweni ebizwa ngokuthi umshado lover nangemva ngesinyathelo esisodwa, ezifana enkingeni iba ukubandakanyeka ukuqeda kwenzekani, ungalokothi ayethanda it akusho ukuthi umphumela. Njengoba
imizwa yakhe cishe iqondiswe ekufezeni nezinye, ubuhlobo babo kuwukuhlakanipha ukulondoloza isimo samanje. Kuyinto kahle ukuya kanzima ngisho ukuba azivume, kube into engasho lutho uma abantu imizwa ezimbili hhayi Kungase yokuvalelisa nokuhilizisana endaweni ithuba. Ukushintsha ukugeleza ikusasa, balwela ukugcina isimo esikhona manje, sincoma ukuthi ubheka isimo nge phambili kunayo ngemizwa yakhe.